Home Ugbo elu ụgbọ elu Multicopter Jiri drones maka nchekwa ihe akaebe - ncheta ncheta na ụlọ ndị agbata obi.
Video gara aga F-104 THOMAS GLEISSNER RC TURBINE JET
Video nke ozo AKTRKỌ AKW UKWỌ AKW UKWỌ AKW WITHKWỌ KWES WITHR WITH NA DISC BRAKE INWETA FLORIAN SCHAMBECK LUFTSPORTTECHNIK [4K]
1. April 2020 - LUD: 18. December 2020
Ihe nkiri na ojiji nke drones na AHID AHID Nchedo, ncheta ncheta na ụlọ ndị agbata obi. N'ime nchekwa nke ọtụtụ ihe akaebe na obodo Berlin na mpaghara Kreuzberg, e webatara ụdị drones dị iche iche na ikuku nke Berlin maka iji azụmaahịa (ED-R 146). Ihe karịrị foto foto 49.000 ka emepụtara na ụlọ atọ na ihu ha. Ejiri foto 129.000 gụnyere ndekọ nke ime ụlọ nke ala niile nke ụlọ ndị agbata obi, bụ ndị edepụtara ma nyochaa nke ọma.
Nzube: Ichebe ihe akaebe tupu mmalite ọrụ ihe owuwu.
More banyere ọtụtụ ọrụ sitere na ụlọ ọrụ ọkachamara
MGBE BLỌ TOBU ụlọ na mba, na https://schaeden-an-gebaeuden.de
MIG-15 MIKHAIL BALENKO TEAM RUSSIA RC TURBINE JET 1ST COMPETITION Flight (13,5KG) JET WM 2013
Tags Ichebe ihe akaebedroneụgbọ elu ikuku na-achịkwaMessenModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluụgbọ elu igweOnyeka OnwenuRCụgbọ elu rcrc nlereanyareviewsTrailerihe